नेपालमा इन्टरनेट सेवामा व्यापक ठगी | Safal Khabar
नेपालमा इन्टरनेट सेवामा व्यापक ठगी
आइतबार, १८ फागुन २०७६, १३ : ५९
– सरस्वती ढकाल, खोज पत्रकारिता केन्द्र
६ महीना अगाडि पत्रकार लेनिन बन्जाडेलाई वल्र्डलिंकका प्रतिनिधि घरमै पुगेर नेट टीभीको डेमो देखाए । टीभीका अतिरिक्त ‘फिल्म ग्यालरी’ र ‘यूट्युब’ हेर्न पाइने पनि बताए । उनी रु. १८ हजार ७०० तिरेर वल्र्डलिंकको वार्षिक ग्राहक बने । तर तीन दिनमै ‘नेट टीभी’ मा ‘यूट्युब’ बन्द गरियो । बन्जाडेले कम्पनीमा फोन गरेर बुझे, प्राविधिक कारणले ‘यूट्युब’ नचल्ने भनियो ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–६ चुनदेवीकी मञ्जु थपलियाको फुर्सदको साथी भनेकै इन्टरनेट हो । मञ्जुले वार्षिक रु।१६ हजारमा वल्र्डलिंकबाट २५ ‘मेगाविट्स पर सेकेन्ड’ ९एमबीपीएस० क्षमताको इन्टरनेट किनिन् । चार वर्षदेखि वल्र्डलिंकको सेवा लिइरहेकी मञ्जुका भनाइमा, शुरूका डेढ वर्षसम्म सेवा राम्रै थियो । अहिले राम्रोसँग भिडियो चल्दैन । दिनमा निकै ‘स्लो’ हुने इन्टरनेट राति ११ बजेपछि भने अलि ‘फास्ट’ चल्छ । उनी भन्छिन्, “पटक–पटक फोन गर्दा पनि मर्मत हुँदैन । ‘अनलाइन मूभी’ हेर्न ‘बफरिङ’ हुन्छ । २५ एमबीपीएस भने पनि ‘साइट’ साह्रै ढिलो चल्छ ।”
नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयका प्रमुख डा।राजीव सुब्बाले सुविसुको इन्टरनेट प्रयोग गरेको साढे चार वर्ष भयो । पछिल्लो एक वर्षदेखि घरमा ‘भायोनेट’ को पनि सेवा लिएका छन् । सुविसुको इन्टरनेटमा ‘स्पीड’ मन नपरेपछि अर्को पनि सेवा लिएको उनी बताउँछन् ।
पहिलेको तुलनामा इन्टरनेटमा धेरै सुविधा छन् तर प्रविधिले जति सहज बनाएको छ नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले त्यो सुविधा उपभोक्तालाई दिन नसकेको उनको बुझाइ छ । सुब्बा भन्छन्, “२५ वर्ष अगाडि मर्कन्टाइलको सेवा निकै महँगो थियो । अहिले महीनाको रु. २–३ हजार भए राम्रो ‘स्पीड’ भएको इन्टरनेट पाउन सकिन्छ । तर, आईएसपीहरूले ‘सेयरिङ’ गर्ने ‘मेकानिजम’ प्रयोग गर्छन् जसले गर्दा आफूलाई इन्टरनेट चाहिएको समयमा समस्या हुन्छ ।”
पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा एमएससी अध्ययनरत विद्युत् लामिछाने तीन वर्षदेखि सुविसुको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्् । उनले सुविसुसँग मासिक रु।१३०८ मा १५ ‘एमबीपीएस’ ‘स्पीड’ को इन्टरनेटका लागि सम्झौता गरेर सेवा लिएका हुन् । उनी भन्छन, “मलाई त अहिले १ ‘एमबीपीएस’ ‘स्पीड’ को इन्टरनेट सेवा पनि पाए जस्तो लाग्दैन ।”
सेवा प्रदायकहरूले जे–जस्तो दाबी गरे पनि इन्टरनेट सेवामाथि पहुँच विस्तारसँगै ठगीको मात्रा पनि बढ्दो छ । सीमित आपूर्तिकर्ता र बढ्दो मागका कारण उपभोक्ताले मूल्य अनुसार सेवा पाइरहेका छैनन् । न्यून गुणस्तरको सेवाका लागि महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । काठमाडौं क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा।आविस अधिकारी सार्वजनिक विज्ञापन गरेरै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहक ठग्ने गरेको बताउँछन् । अधिकारी भन्छन्, “नियामक निकायले सेवाग्राही ठगिएको सूचना कुनै न कुनै माध्यमबाट पाएको छ, तर किन हो ध्यानै दिंदैन ।”
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूसँग गरेका कुराकानीबाट के भेटिन्छ भने– प्रति महीना रु. १ हजारदेखि रु. ३५०० सम्म तिर्ने उपभोक्ताको घरमा सामान्यतया महीनामा तीनरचार दिन इन्टरनेट चल्दैन । अनि उपभोक्तालाई लोभ्याउन न्यूनतम ८ ‘एमबीपीएस’ देखि ३५ ‘एमबीपीएस’ को विज्ञापन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने इन्टरनेट सेवाको गति भने त्यसको एक चौथाइ पनि हुँदैन ।
विघटित उच्चस्तरीय सूचनाप्रविधि आयोगका पूर्वप्रमुख तथा सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईका विचारमा उपभोक्ताले सम्झौता बमोजिम सेवा पाएरनपाएको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परीक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि गरिरहेको छैन । भट्टराई भन्छन्, “सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारिरहेको छ । इन्टरनेटमै समस्या देखिएपछि कसरी ‘डिजिटल’ नेपाल बन्ला रु”
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, इन्टरनेट मर्मतसम्भारका लागि उपभोक्ताबाट कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १५ ९ज० अनुसार पनि कुनै कारणले दूरसञ्चार सेवा बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो नियम संशोधन गर्दै २०७६ साउनदेखि मासिक शुल्कको आधारमा सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भए जस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले एउटै ‘प्रडक्ट’ समान मूल्यमा समेत पाउन सकेका छैनन् । एउटा कम्पनीले २० ‘एमबीपीएस’ को मूल्य मासिक रु. १ हजार तोकेको हुन्छ भने अर्को कम्पनीले रु. ७५० मै यस्तो ‘अफर’ ल्याइरहेको हुन्छ । उपभोक्ताले सोध्दा कम्पनीको ख्याति अनुसार मूल्य निर्धारण भएको जवाफ दिइन्छ । सरकारले लागू गरेको ‘ब्रोडब्यान्ड’ नीति अनुसार सन् २०१८ भित्र नै ‘ब्रोडब्यान्ड’ को प्रारम्भिक दस्तुर प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य थियो । जस अनुसार हाल ‘ब्रोडब्यान्ड’ को शुरुआती मूल्य वार्षिक रु. ५७४७।५० र मासिक रु. ४७८ हुनुपर्ने हो । तर, अहिले पनि उपभोक्ता मासिक न्यूनतम रु. १ हजार तिर्न बाध्य छन् ।
#इन्टरनेट सेवा #ठगी